उच्च अन्त ग्राफिक्स कार्ड बजार को पौराणिक प्रतिनिधि - GeForce GTX 570 छ nvidia गरेको देखि - पुरस्कार र पहिचान संग कुनै आश्चर्य। यो खेल समुदाय "दशक को सबै भन्दा राम्रो कार्ड" नाम थियो छ जो चिप, को मात्र निर्माता छ। विस्तृत विवरण, परीक्षण र मालिकको समीक्षा आफ्नो आफ्नै गेमिङ कम्प्युटरको लागि एउटा भिडियो उपकरण चयन गर्न भविष्यमा उसलाई मदत गर्नेछ जो पाठक, को रहस्य खोल्न हुनेछ।
भिडियो कार्डहरू बजार मा Oddities
निर्माता द्वारा योजना रूप मा, GTX 570 को संशोधन तिनीहरूले भन्न, केही गलत भयो, जूनियर श्रृंखला GeForce GTX 580 को प्रमुख मोडेल हुनुपर्ने थियो, तर। तपाईं गेमिङ उद्योग मा आईटी पेशेवरों को समीक्षा ध्यान भने, त्यसपछि निर्माता छ nvidia नै कोर, एक नेता सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ जो एक हल्का ग्राफिक्स कार्ड निर्माण गरेर ठूलो गल्ती गरे। , घडी आवृत्ति कम स्मृति कन्फिगरेसन परिवर्तन र उच्च प्रदर्शन र कम लागत, कम्प्युटर बजार मा नयाँ उत्पादन प्राप्त गरेको छ जो संग तुलना गर्न सक्नुहुन्न CUDA कोर कम।
फलस्वरूप, nvidia कम्पनी नै समस्या, अधिकांश मानिसहरू शीर्ष एकाइ संग नयाँ GeForce GTX 570 ग्राफिक्स कार्ड तुलना रुचि छैन किनभने स्थापित भएको छ। क्रेता महत्त्वपूर्ण किफायती मूल्य, भविष्यको लागि खेल र सभ्य ओभरक्लकिङ संभावित मा उच्च प्रदर्शन हो।
त्यसैले, दुई भिडियो तिनीहरूलाई बीच छ मतभेद भन्दा बढी समान GF 110. - नवीनता प्रवेश-प्रसिद्ध प्रमुख GTX 580 भएकोले यो कठिन भएको GTX 570 को ग्राफिक्स कोर समान छ भन्ने अनुमान छ। त्यसैले, एक नवीनता लागि GeForce GTX 570 विनिर्देशों छन् निम्नानुसार:
CUDA कोर को संख्या - 480 एकाइहरु (32 एकाइहरु को 580 मोडेल भन्दा कम);
क्रमशः प्रति एकाइ स्ट्रिमिङ multiprocessors को रकम घट्यो, र 15 टुक्रा छ;
बनावट एकाइहरु - 60 (नेता मा पद 64);
यो 732 मेगाहर्ट्ज (772 मेगाहर्ट्ज) गर्न ग्राफिक्स कोर अप को आवृत्ति कम गर्छ, तर मालिक उत्पादकत्व सामान्य प्रवेग हुन सक्छ को हानि बनाउन अप गर्न, आफ्नो समीक्षा मा उल्लेख;
3800 मेगाहर्ट्ज, तर मार्केटिङ उपकरण निर्माता रूपमा मूल्याङ्कन यस धेरै मालिकहरूलाई देखि 4000 मेगाहर्ट्ज (1000 मेगाहर्ट्ज4स्ट्रिम) अवलोकन स्मृति गति कमी;
भिडियो स्मृति (GeForce GTX 580 मा 1535 को सट्टा एमबी) 1280 MB हो - केवल स्मृति मोड्युल unsoldered थियो;
स्मृति बस 320 एक नेता को लागि मानक 384 बिट को सट्टा, हराएको थियो बिट;
गर्मी अपव्यय 219 वाट (को 580 मोडेल मा, संख्या 244 डब्ल्यू छ) छ।
कम्पनी छ nvidia मार्केटिङ मा बयान अनुसार, ग्राफिक्स कार्ड खेलाडीहरूको लागि "म्याट्रिक्स" गर्न पुस्तिका एक प्रकारको बन्न थियो, तर भिडियो कार्ड को उपस्थिति एकदम फरक कथित थियो। खरीदारों तरिका डरलाग्दो-देख उपकरण GTX 280 सम्झना र भनिन्छ इन्टरनेट भिडियो कार्ड मा आफ्नो टिप्पणीमा "उदास Crypt।" एउटै अनौठो ग्याजेट डिजाइन: कालो प्लास्टिक आवास ठंडा पूर्णतया संलग्न सर्किट बोर्ड, dilution रंग पातलो हरियो धर्काहरू। भिडियो कार्डको फिर्ता मा छ nvidia को GeForce छ को GTX 570 एक विशाल टर्बो प्रशंसक छ।
स्वाभाविक, एक स्थापना बेला भिडियो उच्च अन्त वर्ग उपकरणबाट आशा थियो रूपमा दुई एकाइहरु ओगटेको र गुणात्मक हावा सेवन लागि तेस्रो yunite मा उपलब्ध अन्तरिक्ष दाबी। को Chipset को एक कम तापमान मर्मतसम्भार यसलाई पूर्ण ह्याण्डल देखि दोष, को ठंडा सिस्टम असफल संग पत्ता लगाउन।
प्रणाली विशेषताहरु ठंडा
यो कि भइरहेको GF ग्राफिक्स कोर 110 कार्ड को प्रदर्शन, को ठंडा सिस्टम को दर्जा मा निर्भर गर्दछ टिप्पण लायक छ। निर्वात - त्यसैले, nvidia निर्माता सर्किट बोर्ड र रेडिएटर प्लेट बीच बिना हावा सिल ठाउँ सिर्जना भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन् जो एक नयाँ प्रविधि, शुरू गरेको छ। यस्तो नवीनता प्रभावकारी गरम तत्व देखि गर्मी dissipate थप अनुमति दिएको छ। यो यसैले बोर्ड हावा छोड्न सक्षम छन् जो कुनै पनि यांत्रिक दोष, छैन भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
कि सिस्टम बोर्ड गर्न गर्मी डुब्नु सुरक्षित कि स्क्रू, छाप NVIDIA देखि मूल भिडियो कार्ड को धेरै मालिक याद छ। यो ठंडा सिस्टम को सुरक्षा को कारण गरिन्छ। को GeForce GTX 570 मा एक छाप तोडने भएपछि, प्रयोगकर्ता कारखाना प्रणाली पुनर्स्थापना असम्भाव्य छ। यसलाई धूलो एक निर्वात मा हुन गर्दैन टिप्पण लायक छ, र त्यहाँ चढ्नु त्यहाँ केही छ।
साथै, निर्माता यसको उपकरण भोल्टेज अनुगमन प्रणाली आपूर्ति भएको छ। सीमा कुनै जम्प शक्ति प्रणाली उपयोगी तनाव पङ्क्तिबद्ध छ ठ्याक्कै 12 वी को लागि सेट गरिएको छ, वा बस ग्राफिक्स कार्ड बन्द। यो खराब सञ्चालन घटिया शक्ति आपूर्ति विरुद्ध उपकरण सुरक्षाको लागि गरिन्छ।
सुरु दिइएको छ
पहिलो भिडियो कार्ड, विश्व बजार जानेछन्, Gigabyte GeForce GTX 570. सार्वजनिक बस दुई भिडियो कार्ड प्रस्तुत निर्माता थियो। प्राथमिकता मूल्य सबै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध भएको थियो किनभने पहिलो यन्त्र, उच्च अन्त वर्ग तल्लो खण्ड मा थप उद्देश्य थियो। छ nvidia तीतो रंग भिडियो एडप्टर बीचमा एक विशाल हरियो आँखा को रूप मा धेरै आकर्षक स्टिकर बदलिएको छ - निर्माता गरेका कुनै पनि परिमार्जन मात्र उपस्थिति प्रभावित कुनै परिवर्तन भएको थियो। पनि परिमार्जन कूलर पासोमा परे। फलस्वरूप, भिडियो कार्डको उपस्थिति स्पष्ट टर्मिनेटर को अनुहार जस्तो छ।
तर दोस्रो उदाहरणका एउटा कारण आफ्नो नाम SuperOverclock थियो। निर्माता Gigabyte 845 मेगाहर्ट्ज र 1464 मेगाहर्ट्ज गर्न खडा गणनाको एकाइहरूको फ्रिक्वेन्सी गर्न ग्राफिक्स इन्जिन dispersed। स्वाभाविक, को ठंडा सिस्टम महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भइरहेको छ। स्वामित्व कूलर तीन विशाल प्रशंसकहरूसँग स्थापना गरिएको थियो। साथै, निर्माता सर्किट बोर्ड परिमार्जन:
स्मृति चिप्स Hynix, मा 1250 (5000) मेगाहर्ट्ज सञ्चालन सक्षम। भिडियो परीक्षण को रूप मा, चिप्स को सम्भावित एकदम ठूलो (अप कुनै असफलता संग 1300 मेगाहर्ट्ज गर्न) छ;
पूर्ण सिस्टम शक्ति redesigned, ठोस-राज्य capacitors मा बर्तन प्रतिस्थापन सहित।
आफ्नो समीक्षा मा मालिक द्वारा उल्लेख रूपमा, निर्माता बाहिर आफ्नो ग्राहकहरु एउटा एकदमै रोचक चरण लगे छ - शक्ति प्रणाली को आधुनिकीकरण दुई स्मृति चिप्स मा निष्कर्षमा छ। खरिद र 128 एमबी दुई चिप्स स्थापना गर्न भने, 320 बिट गर्न 1536 एमबी भिडियो Gigabyte 1280 को मात्रा, साथै बस चौडाइ वृद्धि। र को प्रशंसक द्वारा उल्लेख रूपमा योजना काम "एक टांका फलाम काम", तर कौशल र सावधानी आवश्यक छ।
प्रक्रिया पूरा भएपछि दोस्रो सुविधा कम गर्मी संग overclock गर्ने क्षमता छ। ग्राफिक्स कोर 920 stably मेगाहर्ट्ज, गर्न accelerates ठंडा सिस्टम कुनै पनि snags बिना संचालित। तथापि, शक्ति सिस्टम भिडियो चलाउन गर्दा सुधार शक्ति पिन 8 मार्फत आपूर्ति गर्न आवश्यक र6पिन connectors (y छ nvidia6+6थियो)।
कन्फिगरेसनमा उत्पादन छ nvidia GeForce GTX 570 Gigabyte देखि GPU तापमान अनुगमन प्रणाली, जो अधिक तात्दै को मामला मा कुनै स्वचालित छुट्टी छैन छ भन्ने हो प्राप्त गर्न सक्षम छ जो उपकरण प्रवेग, को लागि एक स्वामित्व उपयोगिता छ, र तपाईं विसर्जन ठूलो परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ (तपाईँको आफ्नै मा जोखिम)।
को ड्रागन अनुहार धेरै
एउटै Chipset, MSI र hurried दुई ग्राफिक्स कार्ड प्राप्त गर्नुहोस्। निर्माता पनि कम लागत खण्ड लिन र महंगा उपकरणहरू संग नेतृत्व प्रदर्शन को लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरे। भिडियो कार्ड MSI GeForce GTX 570 मूल्य एक किफायती संग मानक छ nvidia ठंडा प्रणाली संग, एक सस्ती विकल्प Gigabyte रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निर्माता को उदास रंग जो माथि चिप को निर्माता र मोडेल को संकेत संग एक विशाल सेतो साइन flaunts एक अनौठो रंग स्टिकर द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ। राम्रो अनौठो निर्णय अझै पनि thrifty प्रयोगकर्ता मनपराएका।
तर भिडियो कार्ड को दोस्रो उदाहरणका मा एक स्वामित्व ठंडा सिस्टम MSI ट्विन Frozr III मात्र एक सभ्य भिडियो कार्ड मा स्थापित छ, किनभने नराम्ररी काम गरे। निर्माता आपूर्ति पीसीबी , जगेडा को BIOS जाहिर छ, चरम गर्न alluding को प्रवेग सुरक्षित उपकरण बाल्न गर्न सकिन्छ भनेर। अलिकति परिवर्तन सिस्टम शक्ति, तर सबै शक्ति अझै पनि कार्ड पछाडि गरियो चिप्स - परीक्षण को लागि यो वर्दी गर्मी अपव्यय प्रभावित। भिडियो परीक्षण ताप शक्ति घटक GPU को नजिकै तापमान वृद्धि गर्दैन देखाउँछ।
को GeForce GTX 570, MSI सबैभन्दा ऊर्जा कुशल प्रतियोगिहरु छ। 270 मेगाहर्ट्ज गर्न कुनै-लोड ग्राफिक्स कोर घडी आवृत्ति रिसेट जो एक नियन्त्रक को रूप मा ब्रान्ड नयाँ सुविधा प्रयोगकर्ता आर्थिक आनंद स्पष्ट छ। तथापि, मालिक को समीक्षा द्वारा न्याय, यो अझै पनि छैन जहाँ तपाईं ब्याट्री बचत गर्न नकारात्मक रूपमा देखिन्छ आवश्यकता हो, यस्तो कदम यति धेरै प्रयोगकर्ताहरू ल्यापटप, छ।
कारखाना overclocked MSI निर्माता बरु अनौठो - ग्राफिक्स कोर लागि 770 मेगाहर्ट्ज गरिब देखिन्छ। एक स्पष्ट तात्दै - तर, हाम्रो परीक्षण मा ग्राफिक्सएडप्टर 920 मेगाहर्ट्ज कोर र 4500 मेगाहर्ट्ज स्मृति मा राम्रो प्रदर्शन, तर, थप यो मूल्य भन्दा, भिडियो कार्ड ठंडा प्रणाली प्रशंसक एक eerie सा फेंकना गर्न सुरु देखाउँछ। यसलाई गरिएका रूपमा, समस्या यस्तो भार लागि डिजाइन जो छैन चिप सैमसंग स्मृति पछि निहित। विशेषज्ञहरु भिडियो कार्ड ओभरक्लकिङ काम गर्ने छैनन्, तर मौन मा खेल को प्रशंसक लागि, ठंडा सिस्टम MSI ट्विन Frozr III अधिकतम सुविधा सिर्जना गर्नेछ भन्छन्।
कसले उपभोक्ता सामान को ताइवानी निर्माता, को ASUS कम्पनी, यस्तो कदम मा निर्णय गरिने लाग्यो र megainteresnoe गुणस्तर को खेल प्रदर्शन को सबै प्रशंसक र ओभरक्लकिङ प्रशंसक प्रस्ताव बनाउन थियो - overclockers! पहिलो, अन्य निर्माताहरु जस्तै, ASUS NVIDIA देखि मूल शीतलन प्रणाली कुनै पनि परिमार्जन बिना बजार लागत-प्रभावकारी समाधान शुरू भएको छ - यो सबै आपूर्तिकर्ता गरेर एउटा नयाँ परम्परा जस्तो देखिन्छ।
तर दोस्रो नयाँ उत्पादन स्पष्ट सम्भावित खरिदकर्ता रुचि छ। तीन-मंजिल्ला राक्षस आफूलाई - भिडियो कार्ड एसस GeForce GTX 570 DirectCU द्वितीय निर्माण मा3एकाइहरु लागि लागू पछि। उपकरणको उपस्थिति केवल एक आदर हुन्छ। मिडिया मा राखिएको एक समीक्षा, मा, मालिक छ nvidia उत्पादन पूर्णतया mutated गरिएको छ भनेर भन्न - ग्राफिक्स कोर 570 GTX गर्न पूर्णतया नयाँ ग्राफिक्स कार्ड छ।
ASUS कम्पनी छ
भिडियो एडप्टर GeForce GTX 570 technologists निर्माता ASUS पूर्ण बदलिएको छ बिजुली आपूर्ति प्रणाली:
स्थापित फेराइट chokes, साथै ठोस र रूपमा तन्तालम ;
परिवर्तित शक्ति चरण सर्किट बोर्ड7+ 1 (6-पोल र 8-पिन connectors);
PWM नियन्त्रक सुपर हाइब्रिड इन्जिन स्थापित;
0.4 nanoseconds को पहुँच समय संग सैमसंग नयाँ उच्च प्रविधी स्मृति चिप्स बदलिएको।
यस्तो महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू राम्रो प्रभावित ग्राफिक्स ओभरक्लकिङ गर्दा: ग्राफिक्स कोर र 5000 मेगाहर्ट्ज स्मृति लागि 950 मेगाहर्ट्ज भविष्यका सबै मालिकहरूको लागि बलियो तर्क हुन मानिन्छ।
निर्माता उसलाई यति समग्र गरे सौन्दर्य खातिर छैन रूपमा त्यहाँ प्रयोगकर्ता गर्न र ठंडा प्रणालीमा कुनै शङ्का छ। एल्यूमीनियम को सब्सट्रेट सर्किट बोर्ड तल माउन्ट र ग्राफिक्स कोर र स्मृति चिप्स विशाल एल्यूमीनियम रेडियेटर, कपर ट्यूब मार्फत permeated छ जो, कोर साइटमा reducible, एक ग्राफिक्स कोर संग सम्पर्क गर्न आएको छ। दुई विशाल प्रशंसकहरूसँग शीर्ष एल्यूमीनियम केसिङ सेट। निर्माण स्पष्ट, त्यसैले तीन स्लट मा माउन्ट लागि भिडियो कार्ड निर्माता गरे, धेरै भारी छ।
overclockers एक मनपर्ने
यो भन्दा overclockers रुचि कि उत्पादनहरु कम्पनी Zotac कुनै गोप्य छ। यो चिप लागि परम्परागत को निर्माता उपकरणहरुमा दुई संस्करण जारी गरेको छ। मात्र, आफ्नो प्रतियोगिहरु विपरीत, उहाँले धेरै अनपेक्षित तरिका गरे। Zotac GeForce GTX 570 लागत-प्रभावकारी समाधान तुरुन्तै सबै कम अन्त उपकरणहरूमा स्थापित छ जो स्टक कूलर निर्माता देखि उपलब्ध छ। जाहिर छ, Zotac को प्रयोगशालाहरुमा turbofan छ nvidia गरेको ग्राफिक्स कार्ड स्थिर गर्न सक्ने निर्णय गरे।
तर 570 GTX एएमपी को संशोधन आफ्नो सबै उपस्थिति धेरै मूल उत्पादन जस्तो देखिन्छ। रेडिएटरको माथि कार्डको फिर्ता र एक विशाल सुरक्षा कवर मा नै टर्बो कूलर। शक्ति आपूर्ति प्रणाली परिवर्तन बिना। यसलाई अलिकति परिमार्जन गरिएको छ, तर उपस्थिति, जब nvidia कार्ड संग तुलना प्रभावित छैन। निर्माता कारखाना overclocked 780 मेगाहर्ट्ज कोर र 1000 मेगाहर्ट्ज स्मृति गरे। फलस्वरूप, मालिकको, आफ्नो टिप्पणीमा उल्लेख कुनै पनि ओभरक्लकिङ संभावित कुनै प्रश्न हुन सक्छ बारेमा। आफ्नो ग्राहकहरु लागि Zotac बजार नेता मा बरु अनौठो दृष्टिकोण।
quietness को पीछा मा
तर उपकरण Inno3D iChill GeForce GTX 570 बारेमा धेरै हदसम्म, सकारात्मक नवीन ठंडा प्रणाली संग धेरै खुसी समीक्षाएँ जो। GPU को र स्मृति चिप्स को ठंडा पानी ठंडा पूरा किनभने यो लगभग मनमनै चल्छ। यो कम्पनीको विशेष अधिकार छ - सभ्य प्रदर्शन र कम मूल्य: यो निर्माता Inno3D बजेट वर्ग को खरीदारों ज्ञात छ कि टिप्पण लायक छ। र त्यसपछि - उच्च अन्त-वर्ग यन्त्र, पनि पानी ठंडा संग!
पहिलो स्थानमा उपस्थिति र आकार ग्राफिक्स मा रिश्वत - उपकरण मात्र एक स्लट ओगटेको र भिडियो कार्ड हार्ड ड्राइव को एक टोकरी अवरुद्ध गरिने डर बिना कुनै पनि प्रणाली एकाइ मा हुन सक्छ स्थापना गर्नुहोस्। यो निर्माता ग्राफिक्स कार्ड र पानी ब्लक पाइप आधा मीटर बाहिर सञ्चार मार्फत ल्याएको एक हावा कूलर संग मा vodopompu स्थापित हास्यास्पद छ। कारखाना माथि 780 मेगाहर्ट्ज गर्न कोर मा overclocked Inno3D उपकरण मा, तथापि, प्रयोगकर्ताहरूले प्रदर्शन ग्राफिक्स त्वरक सुरक्षित 860 मेगाहर्ट्ज सम्म उचाल्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट। परीक्षण मा, जब बोली र हल्ला को कुनै पनि माप हुन सक्दैन बारेमा प्रतियोगिहरु संग तुलना। ग्राहक ठूलो दृष्टिकोण।
कसरी दुई कुर्सियों मा बस्न?
चिरपरिचित ब्रान्ड Gainward पनि आफ्नो प्रशंसक दुई उपकरणहरू खुसी। जब प्रतियोगिहरु संग परीक्षण एक सम्मानित निर्माता देखि स्वामित्व ठंडा सिस्टम सधैं शीर्ष चिह्न थियो, त्यसैले कम्पनी को डिजाइनर यस्तो बोट कुरा विश्वास गरेनन् र NVIDIA यसको आफ्नै शीतलन प्रणाली दुई भिडियो कार्ड सिर्जना गर्नुभएको छ।
पहिलो उत्पादन - GeForce GTX 570 1280MB - एक मानक कूलर सबै शीर्ष मोडेल मा उपकरण स्थापना गर्न निर्माता गर्न peculiar छ। ठूलो एल्यूमीनियम रेडियेटर, कपर ट्यूब र प्याड र दुई विशाल प्रशंसक - आश्चर्य प्रशंसक केही विशेष, देखि मानक। किरा मा आपूर्ति विशेषज्ञ उपकरण स्वामित्व उपयोगिता, यो ग्राफिक्स कोर 850 मेगाहर्ट्ज, सबै परीक्षण उत्कृष्ट स्थिरता र प्रदर्शन देखाउन फैलाने सजिलो छ।
GTX 570 प्रेत को दोस्रो प्रतिलिपि मौन उपकरणहरू को बजार उद्देश्य छ। एल्यूमीनियम को radiators बीच माउन्ट छन् जो यो तीन साना कूलर लागि जिम्मेवार। आफ्नो काम सजिलो Airflow प्लेट छ। वास्तवमा, यो एक साधारण निष्क्रिय शीतलन प्रणाली, निश्चित हुन जो तीन कूलर को रूप मा चिसो हावा को inflow छ। प्रवेग पूर्ण अर्डर 850 मेगाहर्ट्ज संग - सीमा छैन र GPU को तापमान कम्प्युटर आवास मा उचित ठंडा सिस्टम मा निर्भर गर्दछ।
यो निर्माता, एक शक्तिशाली ठंडा सिस्टम सेट, एक योग्य ग्राफिक्स कार्ड overclocked दिनुभयो भन्ने तथ्यलाई अनुपम छ किनभने उत्पादन Palit GeForce GTX 570, साधारण प्रयोगकर्ताका लागि थप रोचक हुनेछ। सामान्य मोडमा ग्राफिक्स कोर 800 मेगाहर्ट्ज मा clocked छ। प्रवेग 900 मेगाहर्ट्ज गर्न बाहिर गर्न सकिँदैन, तर यो BIOS भिडियो कार्ड बन्द छ र उपकरण निर्माता ग्यारेन्टी हराउछ। यस्तो कम्पनी Palit को रोचक कदम हो।
को ठंडा सिस्टम लागि, यो भिडियो कार्ड Gainward देखि उधारो (एक चिरपरिचित वास्तवमा - एक बिरूवा दुई ब्रान्डहरु प्रस्तुत)। तदनुसार, क्रममा उपकरण मा स्मृति चिप्स देखि गर्मी र GPU हटाउने। यहाँ उपकरणमा स्थापित सिर्फ एक प्रशंसक त ओभरक्लकिङ यन्त्र मालिकले सिस्टम एकाइ मा ठूलो सा लागि तयार हुनुपर्छ, स्पष्ट यसको आफ्नै डिजाइन को, एकदम हल्ला छ छन्।
कुनै पनि परीक्षण प्रदर्शन भिडियो कार्ड कम्पनी एक EVGA एक प्रतिनिधि बिना पूर्ण छ। यो निर्माता सधैं बाँकी को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ जो यस्तो प्रविधिहरू, को परिचय आफ्नो प्रतियोगिहरु पिट्न प्रयास गर्ने टिप्पण लायक छ। को GTX संग 570 EVGA कम्पनी आफ्नो प्रशंसक प्रभावित व्यवस्थित। ग्राफिक्स, भिडियो, र 3D प्रविधिको सुधार गर्न उपकरण 2560 एमबी को मा-बोर्ड स्मृति छ। एउटा भिडियो फिल्टर, जो लाग्न सक्छ भिडियो स्मृति 2.5 जीबी शायद छ - यहाँ खेलाडीहरूलाई र कार्यालय कार्यकर्ता र भिडियो सम्पादन काम गर्न भएका रचनात्मक मान्छे सोच्न कुरा हो।
स्वाभाविक, नयाँ वस्तुहरूको ओभरक्लकिङ संभावित संग बुरा छ। निर्माता कर्मचारी छ nvidia सेटिङहरू छोडेर ग्राफिक्स कार्ड को विनिर्देशों परिवर्तन थिएन, तर ठंडा सिस्टम अझै पनि प्रतिस्थापित। आफ्नो समीक्षा मा विशेषज्ञहरु भन्न रूपमा, 800 मेगाहर्ट्ज Chipset भन्दा ग्राफिक्स कोर ओभरक्लकिङ त्यहाँ एक महत्वपूर्ण गर्मी (85-90 डिग्री सेल्सियस) छ। यो फैलाने नचाहनु उपकरण संकेत गर्छ।
यो Chipset GeForce GTX 570 समीक्षा किनभने 400 देखि मूल्य दायरामा यन्त्रको लागि, सकारात्मक भन्दा बढी हो कि टिप्पण लायक छ। ई। गतिवर्धन तथ्याङ्कले एकदम आकर्षक छन्। धेरै मालिकहरूले ग्राफिक्स कोर GF 110 धेरै कुराहरू सक्षम छ भनेर भन्न, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा - प्रदान सभ्य ठंडा मात्र एक शक्तिशाली कूलर, तर पनि व्यक्तिगत कम्प्युटर भित्र छ।
सम्भावित खरीदार आवश्यकताहरु अनुसार बजार दायाँ उपकरणमा यो पाउनुहुनेछ। यो मौन उपकरण हुनुपर्छ? Gainward प्रेत वा Inno3D iChill खेल समयमा कोठा मा मौन सुनिश्चित गर्नुहोस्। Gigabyte, ASUS र Palit - प्रवेग लागि राम्रो संभावित। रचनात्मकता एक ग्राफिक्स कार्ड अवस्थित लागि पनि, ल्याब मा एक EVGA राम्रो यो चिन्ता।
के समस्या हल गर्दै आवेदन सर्भर
पीसी लागि शान्त माउस - उत्पादक कामको लागि ठूलो
विन्डोज सिस्टम वातावरण मा वेब क्यामेरा कसरी जाँच गर्ने?
एक उत्तेजना के हो? रिश्तेमा उत्प्रेरणा के हो?
मारिया Boguslavka - को युक्रेनी जनता परिषद को मुख्य पात्र। युक्रेनी साहित्य
"ट्रान्सफर्मर 5": डाली, षड्यन्त्र, र रोचक तथ्य
साइकलका लागि साइकल: मूल प्रकारहरू
मासुको साथ पेन्केक्स: डिशको क्यालोरीको मूल्य र स्वस्थ पोषणमा यसको सम्बन्ध
Antikythera तंत्र - पहिलो एनालग कम्प्युटर